परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्ः सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिन्छ
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन् ।
उखु किसानको समस्या माघको पहिलो साताभित्र समाधान हुन्छ : आपूर्तिमन्त्री भट्ट
काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आगामी माघको पहिलो साताभित्र चिनी मिल र उखु किसानको समस्या समाधान हुने जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय लिई उनले चिनी मिललाई किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए ।
होडिङ बोर्ड राख्न नपाउने व्यवस्थाले नेपाली प्रेस लाभान्वित हुनेछ : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
धनगढी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आफ्नो व्यवसायप्रति आत्मनिर्भर भई मर्यादित र स्वतन्त्र ढङ्गले बाँच्ने आधार भएको मिडियाको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । कैलालीमा निर्माण सम्पन्न भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखा भवनको आज उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘कोही कसैको दवाव पुग्न नसक्ने प्रेस बनाउन सकिएमा मात्र स्वतन्त्र प्रेस भएको मान्न सकिन्छ ।’
निजगढमा विमानस्थल बनाउन राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ : पर्यटनमन्त्री भट्टराई
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनिवार्य भएको बताउँदै उक्त आयोजना निर्विकल्प भएको बताए ।
सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन काँग्रेसको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । प्रमखु सचेतक खाँणले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले हालै पास गरेको सूचना प्रविधि विधेयक संविधानको प्रतिकूल हुने र मौलिक अधिकार हनन गरेको बताए ।
‘मन्त्री भएँ भन्दैमा आफ्नो हैसियत बिर्सिने ?'
काठमाडौँ । ‘मन्त्री भएँ भन्दैमा आफ्नो हैसियत बिर्सिने ? जे मन लाग्यो, त्यही भन्ने ?’ यसो भन्दै हाकिम जंगिँदा शान्तपूर्वक सम्झाउने प्रयास भयो, ‘मन्त्रीसँग बोल्दा हैसियत त तपाईँ बिर्सिँदै हुनुहुन्छ ?’ तर, जवाफ आयो,‘तिम्रो हैसियत मलाई राम्रोसँग थाहा छ १ के गर्नुपर्छ मैले पनि जान्याछु ?’
नेपालले फेरि झेल्न नपरोस् अर्को नाकाबन्दी
काठमाडौँ । आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानीउपर सूक्ष्म निगरानी राख्दै आर्थिक बृद्धिदर, कर प्रणाली र आर्थिक अनुशासनको अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषणका आधारमा बाहिरका विज्ञले गर्ने ठहर कति शक्तिशाली हुन्छ भने देश नै कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । यदी त्यसो भयो भने, नेपालीले संसारभर छिर्नबाट बञ्चित हुनुपर्नेदेखि सबैजसो कारोबार अवैध मानिने खतरा सन्निकट छ ।